Powder Coluracetam Raw (135463-81-9) Mpanamboatra - Phcoker
Ny vovo-dronono Coluracetam dia mpikambana vaovao sy tokana ao amin'ny kilasy racetam nootropics synthetic. Namboarina voalohany ho… ..
Coluracetam (MKC-231) dia zava-mahadomelina racetam synthetic heverina ho toy ny fitambarana nootropic. Ny fandinihana dia milaza fa afaka manatsara ny fahalalana sy ny fitadidiana izy io, ary milaza ireo mpampiasa fa manatsara ny fifantohana, ny fifantohana ary ny fahitana koa izany.
Ny Coluracetam dia manatsara ny fandraisana ny choline avo lenta (HACU), izay ny dingana voafetra amin'ny fetra acetylcholine (ACh). Ny fandinihana dia naneho ny vovony coluracetam hanatsarana ny fahasembanana amin'ny fianarana amin'ny doka am-bava tokana omena ny voalavo izay niharan'ny neurotoxins cholinergic. Ny fandinihana manaraka dia naneho fa mety hiteraka vokam-pahafantarana maharitra eo amin'ny ratin'ny voan'ny neurotoxin cholinergic amin'ny alàlan'ny fanovana ny rafi-pitantanana transporter choline
Ny hevitry ny mpampiasa dia nilaza ihany koa fa ny fandeferana amin'ny vovony coluracetam dia afaka mivoatra haingana. Toy ny fanafody rehetra, indrindra ny nootropics, tsara kokoa ny manomboka amin'ny doka kely kokoa ary miakatra tsikelikely ny fatra rehefa mihetsika sy manitsy ny fanafody ny vatanao. Coluracetam dia tsy misy poizina ary heverina ho mahazaka tsara sy azo antoka.
Famerenana ny tombotsoan'ny fahasalamana amin'ny Coluracetam Nootropic vaovao mahery ao amin'ny atidoha